Chii chinonzi Isu Rekutengesa? | Martech Zone
Chii chinonzi Kushambadzira Strategic?
Chipiri, May 28, 2019 Chipiri, May 28, 2019 Douglas Karr
Pamwedzi yakati wandei yapfuura, ndanga ndichibatsira vatengi veSalesforce nekugadzira zano rekuti vangashandise sei zvakanaka mapuratifomu avo ane rezinesi. Iwo mukana unonakidza uye mumwe wakandishamisa chaizvo. Sezvo ndanga ndiri mushandi wekutanga weExactTarget, ini ndiri fan hombe yezvisingagone kugona kweSalesforce uye zvese zvavo zviripo zvigadzirwa.
Uyu mukana wakauya kwandiri kuburikidza neSalesforce mudiwa uyo ane mukurumbira mukurumbira wekushandisa, kusimudzira, uye kusanganisa iko kuunganidzwa kweSalesforce mapuratifomu evatengi vavo. Kwemakore, ivo vakangozvirova kunze kwepaki… asi ivo vatanga kucherechedza mukaha muindasitiri yaida kuzadzwa - nzira.
Salesforce inopa zviwanikwa zvisingaverengeki uye akakosha mashandisiro kesi kune tarisiro yekuti vamwe vatengi vanoshandisa sei pachikuva. Uye wangu Salesforce Partner anokwanisa kugadzirisa kuitiswa kwechero zano. Iyo mukaha, zvakadaro, ndeyekuti makambani anowanzo pinda muchibvumirano ne Salesforce uye mudiwa pasina kunyatso sarudza kuti zano ringave ripi.
Kuteedzera Salesforce haisi iyo Kushambadzira Strategic. Kuteedzera Salesforce kunogona kutoreva chero chinhu - kubva pakutengesa kwaunoita, waunotengesera, matauriro aunoita navo, mabatanidziro aunoita nemamwe mapuratifomu ako emakambani, pamwe nemabatiro aunoita kubudirira. Kuwana rezinesi uye kutumira matanda ku Salesforce haisi zano… zvakaita sekutenga bhuku risina chinhu.
Chirongwa chekuita chakagadzirirwa kusimudzira nekutengesa chigadzirwa kana sevhisi.
Oxford Living Diction
A Marketing nzira chirongwa chebhizinesi chakazara mutambo wekusvika vanhu nekuvashandura kuva vatengi vechigadzirwa kana sevhisi iyo inopa bhizinesi.
Kana iwe wakatenga a Marketing nzira kubva kuna chipangamazano, iwe ungatarisira kuti vaendese chii? Ini ndakabvunza uyu mubvunzo kuvatungamiriri mune rese indasitiri uye iwe ungazoshamiswa nekuwanda kwemhinduro dzandakagamuchira… kubva pane fungidziro kusvika kumagumo kuurayiwa.
Kuvandudza zano rekushambadzira nhanho imwe mune zvako zvese kushambadza rwendo:
Discovery - Chero rwendo rwusati ratanga, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti uripi, zvakakupoteredza, uye kwauri kuenda. Wese mushandi wekushambadzira, mupi wemubhadharo, kana agency anofanira kushanda kuburikidza nechikamu chekutsvaga Pasina iyo, iwe haunzwisise nzira yekuendesa yako yekushambadzira zvinhu, maitiro ekuzviisa iwe kubva kumakwikwi, kana izvo zviwanikwa zvaunazvo.
nzira - Iye zvino une maturusi ekuvandudza zano rekutanga rinoshandiswa kuzadzisa zvinangwa zvako zvekushambadzira. Zano rako rinofanira kusanganisira kuongororwa kwezvinangwa zvako, chiteshi, midhiya, mishandirapamwe, uye maitiro auchayera kubudirira kwako. Iwe uchazoda chirevo chegore negore cheumishinari, tarisiro yekota, uye pamwedzi kana pasvondo zvinoburitswa. Iri igwaro rinogumbuka rinogona kuchinja nekufamba kwenguva, asi rine kutenga-mukati kwesangano rako.
Kutevedzera - Nenzwisiso yakajeka yekambani yako, yako musika kumisikidzwa, uye zviwanikwa zvako, wagadzirira kuvaka hwaro hweyako yedhijitari yekushambadzira zano. Kuvapo kwako kwedhijitari kunofanirwa kuve nezvose zvishandiso zvinodiwa kuti uite uye kuyera ako ari kuuya ekushambadzira matangi.
kuuraya - Zvino izvo zvese zvave munzvimbo, inguva yekuita marongero awakagadzira uye kuyera maitiro avo ese.
Optimization - Cherekedza iyo inotonhorera honye iyo isu takaisanganisira muiyo infographic iyo inotora yedu yekukura zano uye inoitakura ichidzokera kuDiscovery zvakare! Iko hakuna kupera kweiyo Agile Kushambadzira Rwendo. Kana iwe uchinge wauraya? Yako yekushambadzira zano, iwe unofanirwa kuyedza, kuyera, kugadzirisa, uye kuigadzirisa pamusoro? Nguva yekuenderera kuwedzera huwandu hwayo kune rako bhizinesi.
Cherekedza iro zano rinotangira kuita, kuuraya, uye kugadzirisa. Kana iwe uri kuvandudza kana kutenga zano rekushambadzira kubva kukambani - izvo hazvireve kuti ivo vari kuzoshandisa iro zano, kana kuzviita.
A Yekushambadzira Isu Muenzaniso: Fintech
Tine inonakidza webinar inouya neSalesforce, Maitiro Akanaka Kwazvo Mukugadzira Ruzivo rweVatengi Rwendo kuFinancial Service Makambani, apo patinokurukura nezvekuvandudza nzira dzekushambadzira nemakambani eFinland Service. Iyo webinar yakave yekuve mushure mekunge ndamboita yekuvhuna-kuputsa kutsva muindastiri pane dijitari kupatsanura kwaiitika pakati pemasangano emari nevatengi vavo.
Mukugadzira nzira yekutengesa, takaona:
Ndivanaani vaive vatengi vavo - kubva pakudzidza kwavo kwemari, kusvika pahupenyu hwavo, kune hutano hwavo hwemari, uye nehunhu hwavo.
Kwaive nekushambadzira kwavo - kukura kwakaita sangano ravo mukuvaka hukama navo. Vanga vachiziva kuti ndivanaani, vangave vari kana kwete ivo vaivadzidzisa, kuti kana vatengi vavo vakabatsirwa chaizvo nekudzidza kubva kwavari, uye kana mutengi akazviitira iye pachake?
Sangano raiita sei - dai sangano rakakumbira mhinduro, vaigona here kuongorora mibvunzo iri pamusoro, vanga vaine zviwanikwa zvekudzidzisa nekushongedzera vatengi vavo, uye ko rwendo rwacho rwaive rwevanhu here?
Sangano racho raive riine zviwanikwa - kutsvagurudza kwedu kwakaratidza misoro gumi nemaviri misoro iyo vatengi vavo vaigara vachitsvaga online - kubva kuchikwereti manejimendi, manejimendi manejimendi, kuronga dzimba, kuronga kuronga pamudyandigere. Vatengi vaitsvaga maturusi e DIY kuti avabatsire kuongorora, kuronga, nekushandisa mari yavo… uye masangano avaishanda nawo anofanirwa kuva nawo ese (kana kuti angonongedzera kune mumwe wavo).
Sangano raioneka here mune yega yega nhanho dzekutenga - kubva pakuzivikanwa kwedambudziko, kugadzirisa mhinduro, kusvika pazvinodiwa uye kusarudzwa kwesangano rezvemari, iro sangano rinogona kusvika nhanho dzese murwendo rwemutengi? Vanga vaine maturusi uye zviwanikwa zvekubatsira kusimbisa zvakawanikwa nemutengi uye kuvabatsira kutyaira kumba chibvumirano?
Sangano rinogona kusvikwa kuburikidza nemasvikiro avanoda - zvinyorwa hazvisi izvo chete zviri pakati. Muchokwadi, vamwe vanhu havatombotora nguva yekuverenga zvekare. Sangano rinoshandisa here zvinyorwa, mifananidzo, odhiyo, uye vhidhiyo kuti vasvike tarisiro yavo kana vatengi kwavari sarudza?
Kana yangoitwa, kubudirira kuchayerwa sei neyako nzira yekutengesa? Usati waita zano, zviyero zvekugona zvinofanirwa kutorwa mukufungwa kuti iwe uzive kuti zviri kushanda. Uchamira kwenguva yakareba sei usati wafunga kuti yakabudirira sei? Ndeipi nguva iwe yaunokwidzirisa mishandirapamwe yako? Ndeipi nguva iwe yauchapeta ivo kana asiri kushanda?
Kana iwe uchikwanisa kupindura yese iyi mibvunzo, saka iwe unogona kunge uine yakasimba Marketing nzira. Isu rekushambadzira richakubatsira iwe kufumura, kutsvaga, uye kuronga kuti iwe unoda chishandiso kana zviwanikwa.
Kubva pane fintech muenzaniso uri pamusoro, kambani yako inogona kuona kuti saiti irikushaikwa imba yekugereta yemumba saka iwe une chirongwa chako chekuvaka imwe. Izvi hazvireve kuti zano rinotsanangura zvinoita macalculator, kuti uchaigadzira sei, ichaitirwa kupi, kana kuti uchaikurudzira sei… aya ese matanho ekumisikidza ekuita anogona kuitwa pasi mugwagwa. Iri zano nderekuvaka karukureta iwe yaunofanirwa kusvika kune vatengi. Kuitwa uye kuuraya kunouya gare gare.
Strategic ndiro Gap Pakati Pechinodiwa uye Kuitwa
Sezvo ini ndichitaurirana nemasangano akawanda uye akawanda neSalesforce, tiri kuiburitsa kunze kwepaki pane izvi zvibvumirano. Salesforce yakabatsira mutengi kuziva kudiwa kwesarudzo yehunyanzvi yekuvabatsira nekutengesa kwavo uye kushambadzira kwekuedza.
Mubatsiri weSalesforce aripo kuvabatsira kuita mhinduro yematanho nemaitiro avanotarisira kuita. Asi ini ndiri pakati pezviviri izvi zvichiratidza mukaha uye kushanda pakati pemapuratifomu, mudiwa, uye mutengi kuvandudza iyo urongwa kusvika kwavo tarisiro uye vatengi. Kana paine kuwirirana pakati pedu tese, weSaulforce shamwari inouya yozoshandisa mhinduro, ipapo mutengi anoita zano.
Uye, hongu, apo isu tichiyera mhedzisiro, isu tinofanirwa kugadzirisa zano nguva nenguva. Mukugadzika kwebhizinesi, izvo zvinogona kutora mwedzi kuti zviitwe, zvakadaro.
Tags: CRMzvemari tekinorojiMarketingMarketing nzira